DHAGEYSO:Kenyaan badan oo shaqo la’aan ah iyadoo maanta la xusaya maalinka shaqaalaha adduunka | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Kenyaan badan oo shaqo la’aan ah iyadoo maanta la xusaya maalinka shaqaalaha...
DHAGEYSO:Kenyaan badan oo shaqo la’aan ah iyadoo maanta la xusaya maalinka shaqaalaha adduunka
Waxaa ay maanta ku beegan tahay maalinka caalamka laga xuso maalinta shaqaalaha adduunka hasa ahaate Kenyaan badan ayaa saameynta ka dhalatay cudurka covid-19 awgeed ay shaqo la’aan ku dhacday.
Waxaa sanadkii labaad oo ay Kenyaan badan shaqo la’aan soo foodsaartay iyadoo shan ismaamul oo kala ah Nairobi, Kiambu Machakos, Kajiado iyo Nakuru ay ka jirta xayiraad ah inaan la soo gelin lagana bixin.
Sidoo kale dowlad deegannadan ayaa bandowga habeenkii uu bilaabanaya 8-da fiidnimo ka dib markii ay sare u kaceen xaaladaha cudurka COVID-19 ee sida maalinlaha ah looga diiwaangeliyo.
Wasiirka wasaaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada Simon Kiprono Chelugui ayaa sheegay inay dhici karto in ka badan 450,000 qof ay shaqooyinkoodi waayeen ismaamulladan.
Mar uu arrimahan ka hadlay ayuu yiri
Next articleIndia oo hal maalin laga xaqiijiyay in ka badan 400,000 oo ah xaaladaha cusub ee corona